ပင်​လယ်​​ပျော်​ကြီးများ - CantWait2Say
ပြောချင်လွန်းလို့ စာဖတ်သူတွေထဲမှာလည်း ငယ်​စဉ်​က ပင်​လယ်​ဓားပြရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားများကြည့်​ရင်း ပင်​လယ်​ဓားပြဖြစ်​ချင်​ကြသူ​တွေရှိပါလိမ့်​မယ်​။ ရတနာရှာ​ဖွေတာ​တွေဘာ​တွေထက်​ လက်​တစ်​ဖက်​က သံချိတ်​​ကောက်​အစားထိုးထား​တဲ့လက်​၊ ပခုံး​ပေါ်မှာကြက်​တူ​ရွေးတစ်​​ကောင်​၊အဆုံးအစမရှိတဲ့ပင်​လယ်​ကြီး၊စွန့်​စားခန်း​တွေပြည့်​​နေတဲ့ပင်​လယ်​၊မာယာများတဲ့ပင်​လယ်​ စတာ​တွေကို အရမ်းသ​ဘောကျခဲ့သူ​တွေရှိမှာပါ။တစ်​ချို့လူ​တွေဟာ အဲ့လိုပင်​လယ်​​ပျော်​ဘဝမှာအသက်​ရှင်​​နေကြပါတယ်​။တစ်​ချို့ဆိုရင်​ ပင်​လယ်​မှာ​မွေး၊ပင်​လယ်​မှာ​သေကြပါတယ်​။ဒီ​တော့ ဒီကမ္ဘာကြီးထဲက အ​ပြောကျယ်​တဲ့ပင်​လယ်​ကြီး​တွေမှာရှင်​သန်​​နေကြတဲ့ဘဝ​တွေအ​ကြောင်း​ပြောပြချင်​ပါတယ်​။
မ​လေးရှားနိုင်​ငံက ဘာဂျာယူလူမျိုး​တွေဟာ ​ရေထဲမှာ​မွေးပြီး ​ရေထဲမှာ​သေဆုံးကြသူ​တွေပါ။​ရေတိမ်​ပိုင်းမှာတဲ​တွေထိုးထားတယ်​။ကုန်​စည်​ကူးသန်းဖို့​လှေ​တွေထားတယ်​။သူတို့ရဲ့တဲ​တွေကို ​နွေဦးရာသီ​တွေမှာ နိုင်​ငံခြားသားခရီးသွား​တွေက ​ဒေါ်လာအများကြီး​ပေးပြီး​ခေတ္တ​နေထိုင်​တတ်​ကြတယ်​။
ဘာဂျာယူလူမျိူး​တွေဟာ ပင်​လယ်​​ပျော်​ယဉ်​​ကျေးမှုက​နေ ထွက်​​ပေါ်လာတဲ့လူ​တွေပါ။ ဒါ​ပေမဲ့တစ်​ချို့​နေရာ​တွေမှာ​တော့ သူတို့ရဲ့လူငယ်​မျိုးဆက်​​တွေဟာ ​ငွေ​ကြေး​ရေး​ကြေးပိုအဆင်​​ပြေ​အောင်​ ပင်​လယ်​ကိုစွန့်​ခွာပြီး ကုန်းတွင်းကိုပြန်​လည်​​ခြေချလာကြပါပြီ။
သြစ​တေးလျရုပ်​သံအစီအစဉ်​တစ်​ခုက​တော့ ဘာဂျာယာလူမျိူး​တွေဟာ ဒုက္ခသည်​​တွေဖြစ်​ပြီး ဒီဒုက္ခသည်​​တွေဖြစ်​​နေလို့လည်း မ​လေးရှားအစိုးရက​ ကုန်းတွင်းမှာ နေခွင့်​မပြုတာပါတဲ့။​ရေထဲမှာပဲဘဝကိုကုန်​ဆုံးကြရင်း က​လေး​တွေကလည်း​ကျောင်းမ​နေကြပါဘူး။တစ်​ခါတစ်​​လေမှာ​တော့ ငါး​တွေ​ရောင်းတာမျိုး၊ တစ်​ခြားကုန်​စည်​​တွေ​ရောင်းစရာရှိလာရင်​ ကမ်း​ခြေကိုခဏလာ​ရောင်းတာမျိုး​တော့လုပ်​တတ်​ပါတယ်​။
သူတို့​တွေရဲ့အဓိကအသက်​​မွေးဝမ်း​ကြောင်းဟာလည်းငါးဖမ်းခြင်းပဲဖြစ်​ပါတယ်​။သူတို့သာအင်​တာနက်​သုံးတတ်​မယ်​ဆိုရင်​​တော့ သူတို့ရဲ့တဲ​တွေကို တိုးရစ်​​တွေကိုမျိုးမျိုးမြတ်​မြတ်​​လေးပိုက်​ဆံရ​အောင်​ငှါးစားတတ်​တာတို့ ​လှေတစ်​ခါစီးဘယ်​​လောက်​တို့ အဲ့လိုစီးပွားရှာရင်​ရှာတတ်​လာမှာ​နော်​။အခု​တော့ သူတို့ဟာ ငါး​တွေဖမ်းလိုက်​၊ကမ်း​ခြေလာ​ရောင်းလိုက်​နဲ့ပဲ ဘဝကိုဖြတ်​သန်း​နေကြပါတယ်​။
လူအများအပြားဟာသူတို့ဘဝရဲ့အနားယူတဲ့အချိန်​​တွေမှာ အိမ်​​တွေကို​ရောင်းချပြီး ပင်​လယ်​မှာဖြတ်​သန်း​နေကြတဲ့သူ​တွေရှိလာပါပြီ။တစ်​ချို့လူ​တွေဟာ တစ်​​နေ့တစ်​​နေ့ကား​တွေလူ​တွေကြားမှာတိုး​ဝှေ့​နေတာထက်​ တကယ်​အနားယူနည်းလို့သူတို့သတ်​မှတ်​ကြတဲ့လမ်းကို အဆုံးတိုင်​​ရွေးချယ်​လိုက်​ကြပါတယ်​။
အ​မေရိကန်​သတင်း​တွေနဲ့ စာရင်းဇယား​တွေအရ လူတစ်​ချို့ဟာ ကုန်း​မြေကိုထာဝရစွန့်​ခွာလိုက်​ပြီး အ​ပျော်​စီးသ​င်္ဘောကြီး​တွေ​ပေါ်မှာပဲဘဝကိုဖြတ်​သန်းဖို့ဆုံးဖြတ်​ကြပါတယ်​တဲ့။သ​ဘောင်္ခရီးစဉ်​ဟာတစ်​နှစ်​လုံးစာအတွက်​ ၁၆၅၀၀၀​ဒေါ်လာကျသင့်​ပါတယ်​။
ပုံမှန်​ဘဝမှာအသက်​ရှင်​​နေတာနဲ့အမြဲတမ်းပင်​လယ်​မှာအ​ပျော်​စီးသ​င်္ဘော​ပေါ်မှာအချိန်​ကုန်​ဆုံးရတာနဲ့ဟာ ​ငွေ​ရေး​ကြေး​ရေးအရသိပ်​မကွာပါဘူးတဲ့။ဒါ​ပေမဲ့ သ​ဘောင်္​ပေါ်မှာက​တော့ ကြယ်​ငါးပွင့်​ဝန်​​ဆောင်​မှု​တွေ၊အချိန်​မှန်​ အထူးဟင်းလျာ​တွေနဲ့ အမြဲတမ်းအကူအညီ​ပေး​နေမယ့်​ဝန်​ထမ်း​တွေအပြည့်​နဲ့​ပေါ့။ပြီး​တော့ မီးပွိုင့်​မမိ၊ကားလမ်း​တွေမပိတ်​တာမို့ လက်​​ကျန်​ဘဝကိုဖြတ်​သန်းဖို့ဒီနည်းကို​ရွေးချယ်​ဖို့ဆုံးဖြတ်​ခဲ့ကြတာဖြစ်​ပါတယ်​။
အာရှတိုက်​ရဲ့​ရေပြင်​ကျယ်​​တွေထဲမှာ ပုံမှန်​ဘဝထက်​ရှင်​သန်​ရတာ ခက်​ခဲတဲ့ ပင်​လယ်​​ပျော်​ဘဝ​တွေကို​ရွေးထားသူ​တွေရှိပါ​သေးတယ်​။​နေရှင်​နယ်​ဂျီအိုဂရက်​ဖစ်​ရုပ်​သံလိုင်းရဲ့​ဖော်​ပြချက်​အရ မြန်​မာနိုင်​ငံက မိုကန်​လူမျိုးစု​တွေဟာ သူတို့အချိန်​အများစုကို ကနူး​လှေ​တွေထဲမှာပဲ​နေထိုင်​ကြပြီး မုန်​တိုင်းခဏခဏကျတတ်​တဲ့မုတ်​သုံရာသီ​ရောက်​မှသာကုန်းတွင်းပိုင်းကိုပြန်​လာတတ်​ပါတယ်​။ဒီလိုကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝဟာ သူတို့အတွက်​​တောင်​မှ ​နေရတာခက်​ခဲလှပါတယ်​။
ဘာဂျာယူလူမျိူး​တွေလိုပဲသူတို့ဟာ ငါးဖမ်းကျွမ်းကျင်​ကြပါတယ်​။ဒါ​ပေမဲ့​ခေတ်​သစ်​မိုကန်​လူမျိုး​တွေဟာ ​ခေတ်​ရဲ့တိုက်​စားမှု​ကြောင့်​ ကုန်းတွင်းပိုင်းမှာ ပြန်​လည်​အ​ခြေကျလာရင်း အစက ၁၂၀၀၀ဦး​ရေရှိခဲ့​ပေမဲ့ ၂၀၁၄ခုနှစ်​မှာ​တော့ အ​ယောက်​၂၀၀၀သာ ​ရေထဲမှာဆက်​လက်​​နေထိုင်​လျက်​ရှိပါတယ်​။
အ​ပေါ်မှာ​ဖော်​ပြခဲ့တာ​တွေလိုပဲ ​နောက်​ထပ်​ပင်​လယ်​​ပျော်​ဘဝ​တွေက​တော့ ​ကုန်​တင်​သ​င်္ဘောကြီး​တွေမှာ တည်​ရှိပါတယ်​။ဒါ​ပေမဲ့လည်း ​လေယာဉ်​တင်​သ​င်္ဘော​ပေါ်မှာအလုပ်​လုပ်​ရတာကလည်း စိတ်​ကူးယဉ်​ပင်​လယ်​ဓားပြဇာတ်​လမ်း​တွေလို ရိုးဟိုးဟိုး လို့​အော်​​နေလို့မရပါဘူး။အလုပ်​လည်းပင်​ပန်းပါတယ်​။
​ကုန်တင်​တင်​သ​င်္ဘော​တွေဟာပင်​လယ်​ကိုတစ်​ခုထွက်​ရင်​ ကိုးလအနည်းဆုံးကြာတတ်​လို့်​ အိမ်​မှာကျန်​ခဲ့တဲ့သားသားမီးမီး​တွေ အပတ်​တိုင်း​ဂေါက်​သွားရိုက်​​နေမှာပဲလို့ လွမ်းတတ်​တဲ့အကျင့်​မျိုး​လျှော့ထားသင့်​ပါတယ်​။Officerအဖြစ်​ ရာထူးတက်​ရင်​​တော့ ပင်​လယ်​မှာငါးလပဲ​နေရပါတယ်​။ Captainတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​လာပြီဆိုရင်​​တော့ လခတိုးပြီ​ပေါ့။ဒါ​ပေမဲ့ အပြည့်​အဝတာဝန်​ယူရပြီမို့ မနက်​၂နာရီကြီး ကုန်းပတ်​​ပေါ်မူးပြီးပြုတ်​ကျနိုင်​တဲ့ ငနဲသား​လေး​တွေကို ထိန်းဖို့​တော့တာဝန်​ရှိပါတယ်​။ရိုးဟိုးဟိုး။
​လေယာဉ်​တင်​သ​င်္ဘော​တွေရဲ့အချိန်​ကိုးလက ကြာတယ်​ဆိုရင်​ ငါး​တွေနဲ့ရှစ်​လကြာ​နေရတဲ့ ပင်​လယ်​​ပျော်​​တွေအ​ကြောင်း​ပြောပြပါရ​စေ။သ​င်္ဘောကပ္ပတိန်​က​တော့ ဒီခရီးကို ​ခြေလှမ်းငါးဆယ်​အဆိပ်​ခန်းလို့ အမည်​​ပေးထားပါသတဲ့။
သြစ​တေးလျမှာ ဘာရာမွန်​ဒီငါးဖမ်းရာသီဟာ ​ဖော်​​ဖော်​ဝါရီက​နေ​အောက်​တိုဘာထိပါ။ သ​ဘောင်္​ပေါ်က အဖွဲ့ဝင်​​တွေဟာ ပို​က်​ကွန်​အကြီးကြီး​တွေနဲ့ ငါးဖမ်းကြပါတယ်​။ပိုက်​ထဲမိလာတဲ့ငါးကိုဝိုင်းချုပ်​ကြ၊ဝိုင်းခုတ်​ကြ။ငါးကပြန်​တိုက်​ခိုက်​ရင်​ ပွန်းကြပဲ့ကြနဲ့ အခန့်​မသင့်​ရင်​ အနာထဲပိုးဝင်​ပြီး​သေတတ်​ပါ​သေးတယ်​။ ကံနည်းနည်း​ကောင်းရင်​​တော့ မိ​ကျောင်း​ပေါက်​စ​လေးက အမြီးနဲ့ခတ်​တာ​လောက်​ပဲခံရမှာပါ။ပြီးရင်​​တော့ ဖမ်းလို့ရတဲ့ငါး​တွေ၊တစ်​ခြားအ​ကောင်​​တွေကို ​ရေခဲရိုက်​ပြီး လ​ပေါင်းများစွာအကြာမှာ အိမ်​ကိုပြန်​ခဲ့ကြပါတယ်​။
၂၀၁၁ခုနှစ်​မှာ လူ၁၁​ယောက်​​သေပြီး ​ရေနံဆီ၎ဘီလျံဖိုးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ Deep water horizonမ​တော်​တဆမှုအပြီးမှာ ကမ်းလွန်​​ရေနံစင်​​တွေကိုလူ​တွေပြန်​သတိထားမိလာပါတယ်​။ဒါကို စာဖတ်​သူအ​နေနဲ့ မ​တော်​တဆပါကွာလို့​ပြောချင်​​ပြောနိုင်​​ပေမဲ့ လူ၁၆၇​ယောက်​​သေခဲ့တဲ့ ​မြောက်​ဘက်​ပင်​လယ်​က ပီပါအယ်​ဖာ​ရေနံတူးစင်​ရဲ့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးမ​တော်​တဆမှု​တွေလည်းရှိပါ​သေးတယ်​။​နောက်​​မြောက်​ပိုင်းပင်​လယ်​မှာပဲ အလက်​ဇန်းဒါး​ရေနံစင်​ရဲ့ ၁၂၃​ယောက်​​သေခဲ့ရတဲ့မ​တော်​တဆမှု​တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်​
ဒီလို​နေရာ​တွေမှာ အလုပ်​လုပ်​​တော့မယ်​ဆိုရင်​လည်း အသက်​ကိုဖက်​နဲ့ထုတ်​ထားဖို့ လိုပါလိမ့်​မယ်​။လူ​တွေက​တော့ မင်းအဲ့မှာလုပ်​မယ်​ကြားရင်​ ဝိုင်းတားကြမှာပါ။တစ်​​နေ့ကိုအလုပ်​ချိန်​၁၂နာရီနဲ့ လခ​ကောင်း​ကောင်းရပါမယ်​။နှစ်​ပတ်​လုပ်​နှစ်​ပတ်​နား ဂျူတီမို့အိမ်​နဲ့လည်းသိပ်​မခွဲရပါဘူး။ဒါ​ပေမဲ့ အချိန်​မ​ရွေးမင်းအလုပ်​လုပ်​​နေတဲ့​ရေနံစင်​ဟာ သတင်းထဲပါလာနိုင်​တယ်​​နော်​။
တစ်​နှစ်​ကို၇လတာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​ရမယ်​။နိုင်​ငံ​တွေကို အလည်​သ​ဘောမျိုးလည်းကမ်းကပ်​ရ​သေးတယ်​။ဒါဟာ အ​မေရိကန်​​ရေတပ်​ရဲ့ ​လေ့လာ​ရေးတပ်​ခွဲတစ်​ခုပါ။သုံးနှစ်​​လောက်​ပင်​လယ်​နဲ့ကမ်း​ခြေကြားမှာ သွားလိုက်​ပြန်​လိုက်​ တာဝန်​ထမ်း​ဆောင်​ရမယ်​။နှစ်​ပတ်​ကြာတတ်​တဲ့ ​ရေတပ်​သင်​ခန်းစာ​တွေလည်း တက်​ရမယ်​။
တစ်​ချို့က​တော့​ပျော်​စရာမ​ကောင်းဘူးလို့ဆိုကြ​ပေမဲ့ ဒီလူ​တွေက​တော့သူတို့ဘဝကိုအရမ်း​ကျေနပ်​ကြပါတယ်​။ အပန်း​ဖြေအနားယူခန်းတစ်​ခန်းမှာ ဂိမ်းစက်​​တွေနဲ့ နာမည်​ကြီးရုပ်​သံလိုင်း​တွေပါ ထား​ပေးထားတာ​ကြောင့်​လို့လည်းဆိုပါတယ်​။
နျူကလီးယား​ရေငုတ်​သ​ဘောင်္​တွေဟာ ပုံမှန်​စစ်​သ​င်္ဘော​တွေနဲ့ကွာခြားပါတယ်​။​ရေထဲကို သ​င်္ဘောကြီးထိုးစိုက်​လိုက်​ပြီဆိုတာနဲ့ တံခါး​တွေပြန်​ဖွင့်​ဖို့လုံးဝမဖြစ်​နိုင်​​တော့လို့ မူးပြီးပျို့ တက်​လာပြီဆိုရင်​​တော့ တကယ့်​ဒုက္ခပါပဲ။
ဒါဆို​ရေငုတ်​သ​င်္ဘောmission​တွေမှာဘာလို့​ပျော်​ကြပါလိမ့်​။ သ​င်္ဘော​ပေါ်​ရောက်​တဲ့လူသစ်​​လေးမင်းကို စီနီယာ​တွေက အန်​မဲ့​ကောင်​ လို့​ခေါ်ကြမယ်​။ပြီး​တော့ ​လှေကား​တွေခဏခဏတက်​ရမယ်​။​ခေါင်း​တွေ​ဆောင့်​မိတာမျိုး၊အိပ်​ရာ​ပေါ်ကလိမ့်​ကျတာမျိုးကလည်းရှိပါ​သေးတယ်​။ပြီးရင်​​တော့မင်းအိပ်​ရာ​အောက်​မှာ နျူးကလီးယားဓာတ်​​ပေါင်းဖိုကိုခုအိပ်​​နေရတာသိလာမယ်​။ဒီ​လောက်​ပါပဲ။​ပျော်​စရာ​ကောင်းတယ်​မှတ်​လား?
အ​ပျော်​စီးသ​င်္ဘော​ပေါ်မှာ ဝန်​ထမ်း​တွေအသင့်​နဲ့က စိတ်​ရှုပ်​တယ်​မှတ်​လား။ဒါဆို ရွက်​လွှင့်​လို့ရပါတယ်​။ ​ပေငါးဆယ်​ရှိတဲ့ ရွက်​​လှေတစ်​စင်းကို တနှစ်​လွှင့်​ခ ​ဒေါ်လာနှစ်​သိန်းခွဲနဲ့ပါ။ကြိုက်​သ​လောက်​ဝန်​ထမ်းခန့်​နိုင်​ပါတယ်​။ ​သောက်​ချင်​သမျှအရက်​​တွေအမူး​သောက်​ပြီး ​မှောက်​ချင်​​မှောက်​​နေလို့ရပါတယ်​။
ဒါဟာ အနားယူ​နေကြတဲ့လူချမ်းသာတစ်​ချို့ပဲလုပ်​ကြတာမဟုတ်​ပါဘူး။ ​နောက်​ပိူင်းမှာ လူချမ်းသာ​တော်​​တော်​များများဟာ ဒီလမ်းကိုလိုက်​လာကြပါတယ်​။Living Aboardနာမည်​နဲ့မဂ္ဂဇင်းတစ်​ခုဆိုရင်​ ဒီလို ရွက်​သ​င်္ဘော​လေး​ပေါ်မှာ ဘယ်​လိုအထာကျကျ​နေမလဲလို့ ​ရေးသား​ဖော်​ပြတတ်​တဲ့ သီးသန့်​မဂ္ဂဇင်းတစ်​ခုအ​နေနဲ့ရှိလာပါပြီ။
တချို့လူ​တွေက စွန့်​စားချင်​လို့ဆိုတာထက်​ သမုဒ္ဒရာကြီးကိုချစ်​မြတ်​နိုးကြသူ​တွေပါ။ပင်​လယ်​ထဲမှာပတ်​ပြီး သု​တေသနလုပ်​​နေရတဲ့ ဒီသ​င်္ဘော​တွေဟာ ကမ္ဘာ​မြေအ​ပေါ်မင်းဘယ်​​လောက်​ချစ်​​ကြောင်း ​ပြောပြထားသလိုပါပဲ။ ပင်​လယ်​နဲ့ပတ်​သတ်​တဲ့သု​တေသန​တွေကို ဟမ့်​ရှိုင်းယားတက္ကသိုလ်​ကပြုလုပ်​​နေတာပါ။
ပင်​လယ်​မှာသု​တေသနအတွက်​ ရှစ်​လကြာ​နေရမယ်​။အဖွဲ့ဝင်​အသစ်​ဆိုရင်​​တော့ စစချင်းသိပ်​မလုပ်​ရပါဘူး။ဒါ​ပေမဲ့ အရမ်းလန်းတဲ့​နေရာ​တွေကို​ ရောက်​ဖူးသွားမှာ။ အတ္တလန်​တစ်​သမုဒ္ဒရာ၊ပင်​လယ်​​အောက်​ မီး​တောင်​​သေ​တွေ …..တစ်​ခြားလန်းတဲ့​နေရာ​တွေအများကြီးနဲ့​ပေါ့။
အခု တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ပင်​လယ်​​ပျော်​ကြီးများ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပွောခငျြလှနျးလို့ စာဖတျသူတှထေဲမှာလညျး ငယျ​စဉျ​က ပငျ​လယျ​ဓားပွရုပျ​ရှငျ​ဇာတျ​ကားမြားကွညျ့​ရငျး ပငျ​လယျ​ဓားပွဖွဈ​ခငျြ​ကွသူ​တှရှေိပါလိမျ့​မယျ​။ ရတနာရှာ​ဖှတော​တှဘော​တှထေကျ​ လကျ​တဈ​ဖကျ​က သံခြိတျ​​ကောကျ​အစားထိုးထား​တဲ့လကျ​၊ ပခုံး​ပျေါမှာကွကျ​တူ​ရှေးတဈ​​ကောငျ​၊အဆုံးအစမရှိတဲ့ပငျ​လယျ​ကွီး၊စှနျ့​စားခနျး​တှပွေညျ့​​နတေဲ့ပငျ​လယျ​၊မာယာမြားတဲ့ပငျ​လယျ​ စတာ​တှကေို အရမျးသ​ဘောကခြဲ့သူ​တှရှေိမှာပါ။တဈ​ခြို့လူ​တှဟော အဲ့လိုပငျ​လယျ​​ပြျော​ဘဝမှာအသကျ​ရှငျ​​နကွေပါတယျ​။တဈ​ခြို့ဆိုရငျ​ ပငျ​လယျ​မှာ​မှေး၊ပငျ​လယျ​မှာ​သကွေပါတယျ​။ဒီ​တော့ ဒီကမ်ဘာကွီးထဲက အ​ပွောကယျြ​တဲ့ပငျ​လယျ​ကွီး​တှမှောရှငျ​သနျ​​နကွေတဲ့ဘဝ​တှအေ​ကွောငျး​ပွောပွခငျြ​ပါတယျ​။
မ​လေးရှားနိုငျ​ငံက ဘာဂြာယူလူမြိုး​တှဟော ​ရထေဲမှာ​မှေးပွီး ​ရထေဲမှာ​သဆေုံးကွသူ​တှပေါ။​ရတေိမျ​ပိုငျးမှာတဲ​တှထေိုးထားတယျ​။ကုနျ​စညျ​ကူးသနျးဖို့​လှေ​တှထေားတယျ​။သူတို့ရဲ့တဲ​တှကေို ​နှဦေးရာသီ​တှမှော နိုငျ​ငံခွားသားခရီးသှား​တှကေ ​ဒျေါလာအမြားကွီး​ပေးပွီး​ခတ်ေတ​နထေိုငျ​တတျ​ကွတယျ​။
ဘာဂြာယူလူမြိူး​တှဟော ပငျ​လယျ​​ပြျော​ယဉျ​​ကြေးမှုက​နေ ထှကျ​​ပျေါလာတဲ့လူ​တှပေါ။ ဒါ​ပမေဲ့တဈ​ခြို့​နရော​တှမှော​တော့ သူတို့ရဲ့လူငယျ​မြိုးဆကျ​​တှဟော ​ငှေ​ကွေး​ရေး​ကွေးပိုအဆငျ​​ပွေ​အောငျ​ ပငျ​လယျ​ကိုစှနျ့​ခှာပွီး ကုနျးတှငျးကိုပွနျ​လညျ​​ခွခေလြာကွပါပွီ။
သွစ​တေးလရြုပျ​သံအစီအစဉျ​တဈ​ခုက​တော့ ဘာဂြာယာလူမြိူး​တှဟော ဒုက်ခသညျ​​တှဖွေဈ​ပွီး ဒီဒုက်ခသညျ​​တှဖွေဈ​​နလေို့လညျး မ​လေးရှားအစိုးရက​ ကုနျးတှငျးမှာ နခှေငျ့​မပွုတာပါတဲ့။​ရထေဲမှာပဲဘဝကိုကုနျ​ဆုံးကွရငျး က​လေး​တှကေလညျး​ကြောငျးမ​နကွေပါဘူး။တဈ​ခါတဈ​​လမှော​တော့ ငါး​တှေ​ရောငျးတာမြိုး၊ တဈ​ခွားကုနျ​စညျ​​တှေ​ရောငျးစရာရှိလာရငျ​ ကမျး​ခွကေိုခဏလာ​ရောငျးတာမြိုး​တော့လုပျ​တတျ​ပါတယျ​။
သူတို့​တှရေဲ့အဓိကအသကျ​​မှေးဝမျး​ကွောငျးဟာလညျးငါးဖမျးခွငျးပဲဖွဈ​ပါတယျ​။သူတို့သာအငျ​တာနကျ​သုံးတတျ​မယျ​ဆိုရငျ​​တော့ သူတို့ရဲ့တဲ​တှကေို တိုးရဈ​​တှကေိုမြိုးမြိုးမွတျ​မွတျ​​လေးပိုကျ​ဆံရ​အောငျ​ငှါးစားတတျ​တာတို့ ​လှတေဈ​ခါစီးဘယျ​​လောကျ​တို့ အဲ့လိုစီးပှားရှာရငျ​ရှာတတျ​လာမှာ​နျော​။အခု​တော့ သူတို့ဟာ ငါး​တှဖေမျးလိုကျ​၊ကမျး​ခွလော​ရောငျးလိုကျ​နဲ့ပဲ ဘဝကိုဖွတျ​သနျး​နကွေပါတယျ​။
လူအမြားအပွားဟာသူတို့ဘဝရဲ့အနားယူတဲ့အခြိနျ​​တှမှော အိမျ​​တှကေို​ရောငျးခပြွီး ပငျ​လယျ​မှာဖွတျ​သနျး​နကွေတဲ့သူ​တှရှေိလာပါပွီ။တဈ​ခြို့လူ​တှဟော တဈ​​နတေ့ဈ​​နကေ့ား​တှလေူ​တှကွေားမှာတိုး​ဝှေ့​နတောထကျ​ တကယျ​အနားယူနညျးလို့သူတို့သတျ​မှတျ​ကွတဲ့လမျးကို အဆုံးတိုငျ​​ရှေးခယျြ​လိုကျ​ကွပါတယျ​။
အ​မရေိကနျ​သတငျး​တှနေဲ့ စာရငျးဇယား​တှအေရ လူတဈ​ခြို့ဟာ ကုနျး​မွကေိုထာဝရစှနျ့​ခှာလိုကျ​ပွီး အ​ပြျော​စီးသ​င်ျဘောကွီး​တှေ​ပျေါမှာပဲဘဝကိုဖွတျ​သနျးဖို့ဆုံးဖွတျ​ကွပါတယျ​တဲ့။သ​ဘောင်ျခရီးစဉျ​ဟာတဈ​နှဈ​လုံးစာအတှကျ​ ၁၆၅၀၀၀​ဒျေါလာကသြငျ့​ပါတယျ​။
ပုံမှနျ​ဘဝမှာအသကျ​ရှငျ​​နတောနဲ့အမွဲတမျးပငျ​လယျ​မှာအ​ပြျော​စီးသ​င်ျဘော​ပျေါမှာအခြိနျ​ကုနျ​ဆုံးရတာနဲ့ဟာ ​ငှေ​ရေး​ကွေး​ရေးအရသိပျ​မကှာပါဘူးတဲ့။ဒါ​ပမေဲ့ သ​ဘောင်ျ​ပျေါမှာက​တော့ ကွယျ​ငါးပှငျ့​ဝနျ​​ဆောငျ​မှု​တှေ၊အခြိနျ​မှနျ​ အထူးဟငျးလြာ​တှနေဲ့ အမွဲတမျးအကူအညီ​ပေး​နမေယျ့​ဝနျ​ထမျး​တှအေပွညျ့​နဲ့​ပေါ့။ပွီး​တော့ မီးပှိုငျ့​မမိ၊ကားလမျး​တှမေပိတျ​တာမို့ လကျ​​ကနျြ​ဘဝကိုဖွတျ​သနျးဖို့ဒီနညျးကို​ရှေးခယျြ​ဖို့ဆုံးဖွတျ​ခဲ့ကွတာဖွဈ​ပါတယျ​။
အာရှတိုကျ​ရဲ့​ရပွေငျ​ကယျြ​​တှထေဲမှာ ပုံမှနျ​ဘဝထကျ​ရှငျ​သနျ​ရတာ ခကျ​ခဲတဲ့ ပငျ​လယျ​​ပြျော​ဘဝ​တှကေို​ရှေးထားသူ​တှရှေိပါ​သေးတယျ​။​နရှေငျ​နယျ​ဂြီအိုဂရကျ​ဖဈ​ရုပျ​သံလိုငျးရဲ့​ဖျော​ပွခကျြ​အရ မွနျ​မာနိုငျ​ငံက မိုကနျ​လူမြိုးစု​တှဟော သူတို့အခြိနျ​အမြားစုကို ကနူး​လှေ​တှထေဲမှာပဲ​နထေိုငျ​ကွပွီး မုနျ​တိုငျးခဏခဏကတြတျ​တဲ့မုတျ​သုံရာသီ​ရောကျ​မှသာကုနျးတှငျးပိုငျးကိုပွနျ​လာတတျ​ပါတယျ​။ဒီလိုကွမျးတမျးတဲ့ဘဝဟာ သူတို့အတှကျ​​တောငျ​မှ ​နရေတာခကျ​ခဲလှပါတယျ​။
ဘာဂြာယူလူမြိူး​တှလေိုပဲသူတို့ဟာ ငါးဖမျးကြှမျးကငျြ​ကွပါတယျ​။ဒါ​ပမေဲ့​ခတျေ​သဈ​မိုကနျ​လူမြိုး​တှဟော ​ခတျေ​ရဲ့တိုကျ​စားမှု​ကွောငျ့​ ကုနျးတှငျးပိုငျးမှာ ပွနျ​လညျ​အ​ခွကေလြာရငျး အစက ၁၂ဝဝဝဦး​ရရှေိခဲ့​ပမေဲ့ ၂၀၁၄ခုနှဈ​မှာ​တော့ အ​ယောကျ​၂ဝဝဝသာ ​ရထေဲမှာဆကျ​လကျ​​နထေိုငျ​လကျြ​ရှိပါတယျ​။
အ​ပျေါမှာ​ဖျော​ပွခဲ့တာ​တှလေိုပဲ ​နောကျ​ထပျ​ပငျ​လယျ​​ပြျော​ဘဝ​တှကေ​တော့ ​ကုနျ​တငျ​သ​င်ျဘောကွီး​တှမှော တညျ​ရှိပါတယျ​။ဒါ​ပမေဲ့လညျး ​လယောဉျ​တငျ​သ​င်ျဘော​ပျေါမှာအလုပျ​လုပျ​ရတာကလညျး စိတျ​ကူးယဉျ​ပငျ​လယျ​ဓားပွဇာတျ​လမျး​တှလေို ရိုးဟိုးဟိုး လို့​အျော​​နလေို့မရပါဘူး။အလုပျ​လညျးပငျ​ပနျးပါတယျ​။
​ကုနျတငျ​တငျ​သ​င်ျဘော​တှဟောပငျ​လယျ​ကိုတဈ​ခုထှကျ​ရငျ​ ကိုးလအနညျးဆုံးကွာတတျ​လျို့​ အိမျ​မှာကနျြ​ခဲ့တဲ့သားသားမီးမီး​တှေ အပတျ​တိုငျး​ဂေါကျ​သှားရိုကျ​​နမှောပဲလို့ လှမျးတတျ​တဲ့အကငျြ့​မြိုး​လြှော့ထားသငျ့​ပါတယျ​။Officerအဖွဈ​ ရာထူးတကျ​ရငျ​​တော့ ပငျ​လယျ​မှာငါးလပဲ​နရေပါတယျ​။ Captainတဈ​​ယောကျ​ဖွဈ​လာပွီဆိုရငျ​​တော့ လခတိုးပွီ​ပေါ့။ဒါ​ပမေဲ့ အပွညျ့​အဝတာဝနျ​ယူရပွီမို့ မနကျ​၂နာရီကွီး ကုနျးပတျ​​ပျေါမူးပွီးပွုတျ​ကနြိုငျ​တဲ့ ငနဲသား​လေး​တှကေို ထိနျးဖို့​တော့တာဝနျ​ရှိပါတယျ​။ရိုးဟိုးဟိုး။
​လယောဉျ​တငျ​သ​င်ျဘော​တှရေဲ့အခြိနျ​ကိုးလက ကွာတယျ​ဆိုရငျ​ ငါး​တှနေဲ့ရှဈ​လကွာ​နရေတဲ့ ပငျ​လယျ​​ပြျော​​တှအေ​ကွောငျး​ပွောပွပါရ​စေ။သ​င်ျဘောကပ်ပတိနျ​က​တော့ ဒီခရီးကို ​ခွလှေမျးငါးဆယျ​အဆိပျ​ခနျးလို့ အမညျ​​ပေးထားပါသတဲ့။
သွစ​တေးလမြှာ ဘာရာမှနျ​ဒီငါးဖမျးရာသီဟာ ​ဖျော​​ဖျော​ဝါရီက​နေ​အောကျ​တိုဘာထိပါ။ သ​ဘောင်ျ​ပျေါက အဖှဲ့ဝငျ​​တှဟော ပျို​ကျ​ကှနျ​အကွီးကွီး​တှနေဲ့ ငါးဖမျးကွပါတယျ​။ပိုကျ​ထဲမိလာတဲ့ငါးကိုဝိုငျးခြုပျ​ကွ၊ဝိုငျးခုတျ​ကွ။ငါးကပွနျ​တိုကျ​ခိုကျ​ရငျ​ ပှနျးကွပဲ့ကွနဲ့ အခနျ့​မသငျ့​ရငျ​ အနာထဲပိုးဝငျ​ပွီး​သတေတျ​ပါ​သေးတယျ​။ ကံနညျးနညျး​ကောငျးရငျ​​တော့ မိ​ကြောငျး​ပေါကျ​စ​လေးက အမွီးနဲ့ခတျ​တာ​လောကျ​ပဲခံရမှာပါ။ပွီးရငျ​​တော့ ဖမျးလို့ရတဲ့ငါး​တှေ၊တဈ​ခွားအ​ကောငျ​​တှကေို ​ရခေဲရိုကျ​ပွီး လ​ပေါငျးမြားစှာအကွာမှာ အိမျ​ကိုပွနျ​ခဲ့ကွပါတယျ​။
၂၀၁၁ခုနှဈ​မှာ လူ၁၁​ယောကျ​​သပွေီး ​ရနေံဆီ၎ဘီလြံဖိုးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ Deep water horizonမ​တျော​တဆမှုအပွီးမှာ ကမျးလှနျ​​ရနေံစငျ​​တှကေိုလူ​တှပွေနျ​သတိထားမိလာပါတယျ​။ဒါကို စာဖတျ​သူအ​နနေဲ့ မ​တျော​တဆပါကှာလို့​ပွောခငျြ​​ပွောနိုငျ​​ပမေဲ့ လူ၁၆၇​ယောကျ​​သခေဲ့တဲ့ ​မွောကျ​ဘကျ​ပငျ​လယျ​က ပီပါအယျ​ဖာ​ရနေံတူးစငျ​ရဲ့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးမ​တျော​တဆမှု​တှလေညျးရှိပါ​သေးတယျ​။​နောကျ​​မွောကျ​ပိုငျးပငျ​လယျ​မှာပဲ အလကျ​ဇနျးဒါး​ရနေံစငျ​ရဲ့ ၁၂၃​ယောကျ​​သခေဲ့ရတဲ့မ​တျော​တဆမှု​တှလေညျးရှိခဲ့ပါတယျ​
ဒီလို​နရော​တှမှော အလုပျ​လုပျ​​တော့မယျ​ဆိုရငျ​လညျး အသကျ​ကိုဖကျ​နဲ့ထုတျ​ထားဖို့ လိုပါလိမျ့​မယျ​။လူ​တှကေ​တော့ မငျးအဲ့မှာလုပျ​မယျ​ကွားရငျ​ ဝိုငျးတားကွမှာပါ။တဈ​​နကေို့အလုပျ​ခြိနျ​၁၂နာရီနဲ့ လခ​ကောငျး​ကောငျးရပါမယျ​။နှဈ​ပတျ​လုပျ​နှဈ​ပတျ​နား ဂြူတီမို့အိမျ​နဲ့လညျးသိပျ​မခှဲရပါဘူး။ဒါ​ပမေဲ့ အခြိနျ​မ​ရှေးမငျးအလုပျ​လုပျ​​နတေဲ့​ရနေံစငျ​ဟာ သတငျးထဲပါလာနိုငျ​တယျ​​နျော​။
တဈ​နှဈ​ကိုရလတာဝနျ​ထမျး​ဆောငျ​ရမယျ​။နိုငျ​ငံ​တှကေို အလညျ​သ​ဘောမြိုးလညျးကမျးကပျ​ရ​သေးတယျ​။ဒါဟာ အ​မရေိကနျ​​ရတေပျ​ရဲ့ ​လလေ့ာ​ရေးတပျ​ခှဲတဈ​ခုပါ။သုံးနှဈ​​လောကျ​ပငျ​လယျ​နဲ့ကမျး​ခွကွေားမှာ သှားလိုကျ​ပွနျ​လိုကျ​ တာဝနျ​ထမျး​ဆောငျ​ရမယျ​။နှဈ​ပတျ​ကွာတတျ​တဲ့ ​ရတေပျ​သငျ​ခနျးစာ​တှလေညျး တကျ​ရမယျ​။
တဈ​ခြို့က​တော့​ပြျော​စရာမ​ကောငျးဘူးလို့ဆိုကွ​ပမေဲ့ ဒီလူ​တှကေ​တော့သူတို့ဘဝကိုအရမျး​ကနြေပျ​ကွပါတယျ​။ အပနျး​ဖွအေနားယူခနျးတဈ​ခနျးမှာ ဂိမျးစကျ​​တှနေဲ့ နာမညျ​ကွီးရုပျ​သံလိုငျး​တှပေါ ထား​ပေးထားတာ​ကွောငျ့​လို့လညျးဆိုပါတယျ​။
နြူကလီးယား​ရငေုတျ​သ​ဘောင်ျ​တှဟော ပုံမှနျ​စဈ​သ​င်ျဘော​တှနေဲ့ကှာခွားပါတယျ​။​ရထေဲကို သ​င်ျဘောကွီးထိုးစိုကျ​လိုကျ​ပွီဆိုတာနဲ့ တံခါး​တှပွေနျ​ဖှငျ့​ဖို့လုံးဝမဖွဈ​နိုငျ​​တော့လို့ မူးပွီးပြို့ တကျ​လာပွီဆိုရငျ​​တော့ တကယျ့​ဒုက်ခပါပဲ။
ဒါဆို​ရငေုတျ​သ​င်ျဘောmission​တှမှောဘာလို့​ပြျော​ကွပါလိမျ့​။ သ​င်ျဘော​ပျေါ​ရောကျ​တဲ့လူသဈ​​လေးမငျးကို စီနီယာ​တှကေ အနျ​မဲ့​ကောငျ​ လို့​ချေါကွမယျ​။ပွီး​တော့ ​လှကေား​တှခေဏခဏတကျ​ရမယျ​။​ခေါငျး​တှေ​ဆောငျ့​မိတာမြိုး၊အိပျ​ရာ​ပျေါကလိမျ့​ကတြာမြိုးကလညျးရှိပါ​သေးတယျ​။ပွီးရငျ​​တော့မငျးအိပျ​ရာ​အောကျ​မှာ နြူးကလီးယားဓာတျ​​ပေါငျးဖိုကိုခုအိပျ​​နရေတာသိလာမယျ​။ဒီ​လောကျ​ပါပဲ။​ပြျော​စရာ​ကောငျးတယျ​မှတျ​လား?
အ​ပြျော​စီးသ​င်ျဘော​ပျေါမှာ ဝနျ​ထမျး​တှအေသငျ့​နဲ့က စိတျ​ရှုပျ​တယျ​မှတျ​လား။ဒါဆို ရှကျ​လှငျ့​လို့ရပါတယျ​။ ​ပငေါးဆယျ​ရှိတဲ့ ရှကျ​​လှတေဈ​စငျးကို တနှဈ​လှငျ့​ခ ​ဒျေါလာနှဈ​သိနျးခှဲနဲ့ပါ။ကွိုကျ​သ​လောကျ​ဝနျ​ထမျးခနျ့​နိုငျ​ပါတယျ​။ ​သောကျ​ခငျြ​သမြှအရကျ​​တှအေမူး​သောကျ​ပွီး ​မှောကျ​ခငျြ​​မှောကျ​​နလေို့ရပါတယျ​။
ဒါဟာ အနားယူ​နကွေတဲ့လူခမျြးသာတဈ​ခြို့ပဲလုပျ​ကွတာမဟုတျ​ပါဘူး။ ​နောကျ​ပိူငျးမှာ လူခမျြးသာ​တျော​​တျော​မြားမြားဟာ ဒီလမျးကိုလိုကျ​လာကွပါတယျ​။Living Aboardနာမညျ​နဲ့မဂ်ဂဇငျးတဈ​ခုဆိုရငျ​ ဒီလို ရှကျ​သ​င်ျဘော​လေး​ပျေါမှာ ဘယျ​လိုအထာကကြ​နမေလဲလို့ ​ရေးသား​ဖျော​ပွတတျ​တဲ့ သီးသနျ့​မဂ်ဂဇငျးတဈ​ခုအ​နနေဲ့ရှိလာပါပွီ။
တခြို့လူ​တှကေ စှနျ့​စားခငျြ​လို့ဆိုတာထကျ​ သမုဒ်ဒရာကွီးကိုခဈြ​မွတျ​နိုးကွသူ​တှပေါ။ပငျ​လယျ​ထဲမှာပတျ​ပွီး သု​တသေနလုပျ​​နရေတဲ့ ဒီသ​င်ျဘော​တှဟော ကမ်ဘာ​မွအေ​ပျေါမငျးဘယျ​​လောကျ​ခဈြ​​ကွောငျး ​ပွောပွထားသလိုပါပဲ။ ပငျ​လယျ​နဲ့ပတျ​သတျ​တဲ့သု​တသေန​တှကေို ဟမျ့​ရှိုငျးယားတက်ကသိုလျ​ကပွုလုပျ​​နတောပါ။
ပငျ​လယျ​မှာသု​တသေနအတှကျ​ ရှဈ​လကွာ​နရေမယျ​။အဖှဲ့ဝငျ​အသဈ​ဆိုရငျ​​တော့ စစခငျြးသိပျ​မလုပျ​ရပါဘူး။ဒါ​ပမေဲ့ အရမျးလနျးတဲ့​နရော​တှကေို​ ရောကျ​ဖူးသှားမှာ။ အတ်တလနျ​တဈ​သမုဒ်ဒရာ၊ပငျ​လယျ​​အောကျ​ မီး​တောငျ​​သေ​တှေ …..တဈ​ခွားလနျးတဲ့​နရော​တှအေမြားကွီးနဲ့​ပေါ့။
အခု တငျဆကျပေးလိုကျတဲ့ အကွောငျးအရာလေးကတော့ ပငျ​လယျ​​ပြျော​ကွီးမြား အကွောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကလေးငယ်တွေရဲ့  တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုတွေအတွက်ပြု လုပ်ပေးသင့်တဲ့ နည်းနာ ၈ ချက်
ကလေးငယ်တွေရဲ့  တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုတွေအတွက်ပြု လုပ်ပေးသင့်တဲ့ နည်းနာ ၈ ချက် 1.A mandala © Harald Parth AUT ကလေးငယ်တွေ အတွက် သာမန် ဆော့ကစားနေတဲ့ အရာတွေ အများအပြားကို သစ်သီးတွေ ၊ပန်းပွင့်တွေ အစရှိတာတွေနဲ့ ပေါင်း စပ်ပြီး ရုပ်ပုံဒီဇိုင်းတစ်ခုဖန်တီးစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် …
သင့်ကလေးအသက်(၁၀)နှစ်အရွယ်မှာ စတင်သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်(၁၀)ချက်
သင့်ကလေးအသက်(၁၀)နှစ်အရွယ်မှာ စတင်သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်(၁၀)ချက် မိဘဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ရင် သင့်ကလေးရဲ့အနာဂတ်အတွက် မိဘတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ မိဘတိုင်းကတော့ ကိုယ့်သားသမီးကို ကြင်နာတတ်တဲ့သူ၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူ၊ သူတပါးအပေါ်ကိုယ်ချင်းစာတတ်သူ၊ ရဲရင့်တဲ့သူတွေပဲ ဖြစ်စေချင်ကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအရည်အသွေးတွေနဲ့ သူတို့အပေါ်ဖြစ်စေချင်တာတွေဟာ မှန်းထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာတာတွေလဲရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့သားသမီးတွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ပြုစုပျိုးထောင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့အတွက် ဆုံးမဖို့ ဥပမာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အခုတော့ သင့်သားသမီးကို အသက်(၁၀)နှစ်အတိုင်ခင်မှာ …
ချစ်သူရည်းစားဆက်ဆံရေးတွေ၊လိင်ဆက်ဆံရေးတွေမှာ’အနမ်း’ဟာအရေးအပါဆုံးအချစ်သင်္ကေတအဖြစ်တောင်ယူဆလို့ရပါတယ်။ကိုယ်နဲ့ရေရှည်အလိုက်ဖက်ဆုံးလက်တွဲဖော်ရှာဖွေဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်္ကေတလေးတွေကပဲခင်မင်တဲ့အဆင့်ကနေတိုး၍နက်ရှိုင်းခြင်းသို့နောက်ဆုံးပြင်းရှတဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်းဖြစ်ပွားစေပါတယ်။’အနမ်း’တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာစကားကိုသင်ဘယ်လောက်သိထားသလဲ?စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့အောက်ပါအနမ်း(7)မျိုးအကြောင်းဖတ်ပြီး’အနမ်း’တွေကပြောပြတဲ့စကားလေးတွေကိုနားစွင့်ကြည့်ရအောင်။ ။ (1)ပါးမို့မို့အနမ်း(Cheek Kiss) ပါးမို့မို့မှာနမ်းခြင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေအဆင့်ကနေစတင်စိတ်ဝင်စားလာတဲ့သဘောကိုဆောင်ပါတယ်။တကယ်လို့သင်ကယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ဆိုပါစို့ ဒါဆိုဒီအနမ်းကိုရင်ခုန်စိတ်ဝင်စားကြောင်းမိန်းကလေးကသူမမျက်နှာကိုသင့်ဘက်သို့သိမ်မွေ့စွာယိမ်းယိုင်ပြခြင်းဖြင့်ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့လက်တစ်စုံကသင့်လည်ပင်းနား(သို့)ပခုံးနားတစ်ဝိုက်မှာနေရာယူထားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ့ထက်ပိုသာတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ပါတယ်။ (2)နားမှာနမ်းတဲ့အနမ်း(Earlobe Kiss) နား(နားကပ်ပန်တဲ့နေရာ)မှာနမ်းတဲ့အနမ်းသင်္ကေတကိုတော့ လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့အမူအရာလို့သတ်မှတ်ရပါတယ်။ဘာလို့ဆို နားဆိုတာအရမ်းရင်းနှီးတဲ့ပါတနာတွေအတွက်သီးသန့်သဘောမျိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့အာရုံခံအစိတ်အပိုင်းမို့ပါ။သူငယ်ချင်းတွေဆိုရင်အဲနားတစ်ဝိုက်ကိုအပြန်အလှန်အနမ်းပေးလေ့မရှိသလို တကယ်လို့တစ်စုံတစ်ယောက်ကအဲလိုအနမ်းပေးလာပြီဆိုရင်တော့ သင့်ကိုရူးမူးစွဲလမ်းနေပြီဆိုတာသေချာပါပြီ။ (3)အက်စကီးမိုးအနမ်း(Eskimo Kiss) ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်တစ်ခါမှမကြားဖူးပါဘူး။အခုမှဖတ်မိတာပါ တကယ်လို့သင်လည်းမကြားဖူးဘူးဆိုရင်တော့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။အက်စကီးမိုးအနမ်းဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နှာခေါင်းပွတ်သပ်တဲ့အမူအရာကိုခေါ်ဝေါ်တာပါ။သူငယ်ချင်းတွေကြားသုံးနှုန်းတဲ့အနမ်းသင်္ကေတမဟုတ်သလို ဒီသင်္ကေတဟာလေးနက်တဲ့အချစ်ကိုဖော်ဆောင်နေတာအပြင် သင့်ကိုတဏှာရာဂကင်းတဲ့စိတ်ထက်ပိုသာတဲ့အချစ်မျိုးနဲ့စိတ်ဝင်စားနေကြောင်းပြတာပါ။ရှည်ကြာစွာတွဲနေပြီဖြစ်တဲ့ချစ်သူရည်းစားတွေကဒီအနမ်းနဲ့မကြာခဏပွတ်သပ်ကျီစယ်ကြသလို တကယ်လို့များချစ်ကြင်ခါစအနေအထားမှာသင့်ကိုထိုနည်းကိုအသုံးပြုလာပြီဆိုရင်တော့ …